Semalt: Nzira dzeku Ongorora Yako SEO Performance
2. Nei uchifanira kuongorora yako SEO kuita pakutanga?
3. Kuongorora yako SEO maitiro
7. Peji Yekumhanya
Unoda kukwirira kumusoro kuGoogle TOP? Unoda kutyaira traffic yakawanda kune yako webhusaiti? Unoda kuti uwedzere kuwanda kwekubudirira kwebhizimusi rako? Ongororo yeSEO inogona kungova chinhu chaunoda. Ruzivo rwakaunganidzwa runogona kubatsira mukuita matanho akasarudzika ekuvandudza webhusaiti yako webhusaiti paminjini yekutsvaga, kutyaira zvakanyanya traffic kune yako saiti uye zvimwe zvakawanda.
Semalt ine webhusaiti yakasimba analytics chishandiso chekubudirira kwekutarisa kwemusika; kutariswa kwewebsite yako uye yeaikwikwidza nako; uye ivo vanounzawo kwauri yakazara yakazara analytics bhizinesi mushumo.
Nei uchifanira kuongorora yako SEO kuita pakutanga?
1. Kuongorora yako webhusaiti zvinzvimbo: NaSemalt, unobvumidzwa kuti ugadzire mufananidzo uzere wezvekuti zvinhu zvinomira sei kune rako bhizinesi mumusika wepamhepo. Neruzivo rwunowanikwa, iwe uchave unokwanisa kuratidza pfungwa dzakakosha mune rako ramangwana basa.
2. Kuti uwane misika mitsva: Unowana mikana mitsva yekugoverwa kwezvinhu zvako uye masevhisi uye rako rese rekuvandudza mhando munyika chaiyo izvo zvinokonzeresa matanho ane chekuita nebhizinesi kumatunhu ebhizinesi rako.
3. Kuchengeta ziso munzvimbo dzevanokwikwidza : Semalt inofumisawo ruzivo rwese rwemamiriro ako emakwikwi. Ruzivo urwu ruchakubatsira iwe kuvandudza marongero anoshanda kuti ugare uchigara pamberi pepaketi sezvo iwe uchizowana izvo zvinhu zvavari kuita izvo izvo zvaunogona kudzidzira mukati mako akawanda ezvirongwa zvinoshanda.
4. Kugadzira mharidzo yekuongorora kwako: Semalt inokupa iwe mukana wakasarudzika wekuita chena-chena mishumo yekuongorora kwako iwe yaunogona kutora nyore nyore muPDP kana EXCEL mafomati kubva saiti yavo. Izvi zvakakosha zvakanyanya paunoda kuita mharidzo dzevatengi vako kana timu yako.
Kuongorora yako SEO maitiro
Mushure mokunge mapinda mune yako dashboard, unogona kudzvanya pane icon menyu kuruboshwe uko iwe uchaona rondedzero dzesarudzo dzeSEO kuongorora.
Pamusoro chaipo, iwe une sarudzo yekuwedzera webhusaiti yaunoda kuongorora. Pazasi peizvozvo, iwe une dhibhodhi rako bhatani raunogona kugara uchipfekedza chero nguva yaunonzwa kuda kuenda kune yako dashboard.
Ipapo chaipo pazasi pe bhatani dhibhodhi, ndiyo huru Semalt yekuongorora maturusi ayo akakamurwa muzvikamu zvina - SERP, Zviri mukati, Google Webmasters uye Peji Speed.
Ngatione kuti chimwe nechimwe chezvishandiso izvi chinoshanda sei. Izvo zvakakosha kuti uone pano kuti iwe unogona kugara uchitora mushumo chero kwaunoona bhatani 'Tora Chiitiko "
Iyo SERP ine zvikamu zvitatu pasi payo:
a. Mazwi akakosha mu TOP: Chirevo chakawanikwa kubva pano chinoratidza mazwi ese akakosha anowanikwa saiti yako muGoogle zvotsvaga mhinduro, mapeji akaiswa, uye nzvimbo dzadzo dzeSERP zveimwe rakakosha izwi. Paunodzvanya pa 'Keywords mu TOP', iwe uchaendeswa kune peji kwaunogona kuona huwandu hwemazwi akakosha ku TOP, mazwi makuru kugoverwa ne TOP uye masheya namashoko akakosha.
Iyo 'Nhamba yemazwi akakosha' ndiyo chati inoratidza nhamba yemazwi akakosha muGoogle TOP pamusoro penguva. Izvi zvinobatsira iwe mukutarisa shanduko muhuwandu hwemazwi akakosha ako webhusaiti nhamba mu TOP 1-100 organic yekutsvaga mhinduro.
Ne 'Keywords kugoverwa ne TOP', iwe unogona kuwana chairo nhamba yemashoko akakosha ako webhusaiti nhamba yeGoogle TOP 1-100 organic yekutsvaga mhinduro yakatarwa yakanangana neyakatanga.
'Nzvimbo nemazita akakosha' tafura iyo inoratidza iwe inonyanya kuzivikanwa mazwi akakosha ako webhusaiti mamiriro pazasi muGoogle TOP organic yekutsvaga mhinduro. Tafura inozokuratidzawo nzvimbo dzayo dzeSERP pamisi yakasarudzwa uye neshanduko dzaitika dzakapesana nezuva rakapfuura. Paunodzvanya pane 'maneja mapoka' bhatani, unogona kugadzira boka idzva remazwi, kuronga riripo kana kuti unogona kusarudza kusarudza mazwi makuru kubva ku 'Zvitaurwa neKazwi' tafura iri pazasi wobva wawedzera kuboka rako remazwi. Izvi zvakakosha mune kuti iwe unogona kuishandisa kuongorora iyo webhusaiti yako kufambira mberi nenyaya, URL, nezvimwe.
Semalt zvakare inokupa iwe mukana wekuti uturidze iyo data patafura nematafura akasiyana - izwi rakakosha kana chikamu chayo, URL kana chikamu chayo, Google TOP 1-100 uye chinzvimbo change.
b. Mapeji Akanakisa: Paunodzvanya pa 'Best mapeji', iwe unoratidzwa mapeji pane yako saiti inounza iyo yepamusoro nhamba ye organic traffic. Iwe unofanirwa kudzidza izvi zvakanyatsonaka, uchitsvaga pane-peji peji SEO zvikanganiso, kugadzirisa izvi zvikanganiso, uchiwedzera zvimwe zvakasarudzika zvemukati pamwe nekusimudzira aya mapeji ezere traffic traffic kubva kuGoogle.
'Yakanakisisa mapeji pamusoro penguva' ndiyo chati inozivisa shanduko muhuwandu hwemapeji ewebhusaiti yako mu TOP kubvira pakagadzirwa chirongwa chako. Iwe unogona kutarisa iyo data vhiki imwe kana mwedzi kana iwe uchinja chiyero.
Pazasi 'Kwakanaka mapeji pamusoro penguva', iwe une iyo 'Musiyano' chishandiso icho chinokubatsira iwe kuwana huwandu hwemawebhusaiti muGoogle TOP 1-100 michero yekutsvaga yemichero yakatarwa yakanangana neyakare. Iwe unogona kushandura chiyero kuti utarise mutsauko vhiki kana mwedzi. Iwe zvakare une sarudzo yekuona mutsauko wehuwandu kana mune dhizaini dhizaini.
Iko zvakare kune chati chinodaidzwa kuti 'Sarudza mapeji keywords ma stats' iyo inoratidza shanduko muhuwandu hwemazwi makuru iyo mapeji akasarudzwa akaiswa muGoogle TOP kubva pakuvambwa kweprojekiti.
Chekupedzisira, isu tine 'Mapeji pane TOP', iri tafura inoratidza nhamba yemashoko akakosha peji yakatarwa yakaiswa muGoogle TOP yemazuva akasarudzwa. Iwe unogona zvakare kusefa yemapeji emhando yepamusoro ne URL kana chikamu chayo uye zvakare kusarudza kusarudza iwo mapeji mune yako webhusaiti ari mu TOP 1-100 chinzvimbo.
c. Vanokwikwidza: Apa ndipo paunowana mawebhusaiti ese ari mu TOP zana mamwe mazwi akakosha ako webhusaiti renzvimbo. Iwe zvakare uchaona paumire pakati pevavengi vako nehuwandu hwemashoko ese akakosha mu TOP 1-100.
Pane ino peji, iwe unowana seti yemavhiki anonzi 'Akagoverwa Keywords' ayo anoratidza huwandu hwemashoko akagovaniswa akagoverwa saiti yako uye yako TOP mazana mazana mashanu emakwikwi muGoogle SERP.
Tevere, iwe unowana 'Yakagoverwa Keywords Dynamics' inova chati inoratidza shanduko muhuwandu hwemashoko akagovaniswa ayo vakwikwidzi chaiwo iwe wawakatarisisa akaisa mu TOP.
Pazasi iwe uchaona 'Kukwikwidzana muGoogle TOP' iri tafura inoratidza huwandu hwemashoko akagoverwa iwe newe nevanokwikwidza 'webhu saiti yako mu TOP. Semalt inokupa iwe sarudzo yekudzidza mutsauko muhuwandu hwemashoko akagoverwa akagadziriswa kupokana neyakatanga nguva. Iwe unogona zvakare kusefa rondedzero yeaikwikwidzi webhusaiti yako uchishandisa iyo yakazara domain kana chikamu chayo uye unogona kutamisa chinyorwa kune chete mawebhusaiti akambopinda TOP 1-100.
Pasi pechikamu chemukati, iwe uchaona iyo 'Peji Uniqueness Check' chishandiso iyo mushure mekudzvanya ichakutora iwe kune yayo peji. Apa ndipo paunowana kuti kana Google ichiona peji rako rewebhu rakasarudzika kana kuti kwete. Iwe unofanirwa kucherechedza kuti kunyangwe iwe uine chokwadi chechipiri nezvekusiyana kwewebhu peji rako rewebhu, zvinogoneka kuti zvinogona kunge zvakapihwa nemumwe munhu. Uye kana munhu iyeye anongedzera zvavari pamberi pezako, Google inozoziva yavo seyakanyanya svitsa asi zviri zvako zvichanyorwarwa. Iwe haudi kurohwa nechirango cheGoogle nekuti Google inokutsiura kana uine huwandu hwakawanda hwezvinhu zvakabirirwa pane webhusaiti yako.
Semalt inokupa iyo yakasarudzika pesenti mamakisi kukuzivisa iwe kuti yako webhusaiti iri kuita sei mumaziso eGoogle. A 0-50% mamakisi anokuudza iwe kuti Google inofunga nezvako zvemukati zvakatsanangurwa uye hapana mukana wekukwira chinzvimbo peji rakadai rewebhu. Semalt inogona kukubatsira kutsiva izvo zvako zviripo neimwe yakasarudzika kuti ikupe iwe zviri nani danho.
Pa 51-80%, Google inoona zvirimo zvako sekunyora zvekare. Peji rako rewebhu rine mukana wakaderera pane peji rewebhu chinzvimbo kukura. Asi nei uchigara kweavhareji apo Semalt inokupa iwe zvakanakisa?
Pa81-100%, Google inoona peji rako seyakasarudzika uye peji rako rewebhu peji rinogona kukura risingapindirwe pane Google SERP.
Iwe uchawana runyorwa rwezvinyorwa zvese izvo Googlebot inoona pane iyo chaiyo peji rewebhu mumubvunzo (Semalt ichakubatsirawo iwe kujekesa zvikamu zviviri zvinoenderana newebhu peji rewebhu).
Zvakare, iwe unowana tafura inonzi 'Yekutanga Yenhoroondo Source'. Iyi ndiyo rondedzero yemawebhusaiti ayo Google anotarisa seyakanyanya kuwanikwa peji rako rewebhu peji. Pano iwe unogona kunyatsoziva kuti ndechipi chikamu chemapeji ako ezvinyorwa zvinowanikwa pane yega yega webhusaiti.
Iri ibasa rinokuratidza kuti webhusaiti yako inoratidzwa sei muGoogle organic yekutsvaga mhinduro paunenge uchikuzivisa indexing nyaya kwauri. Pasi peizvi, iwe uchawana kutarisisa, kuita uye sitemaps.
a. Muenzaniso: Muchikamu chekutarisa, unogona kutumira nekutarisa webhusaiti yako. Iwe unogona zvakare kuwedzera yako URLs kuGoogle index.
b. Performance: Iyo data inowanikwa pano inokuudza iwe kushanda kwewebhu webhusaiti. Iwe unogona kufananidza iyo data kune chaiyo date / nguva yenguva. Izvi zvichakubatsira iwe kuona iyo yakasimba webhusaiti yako uye zvakare kukanganisa kwega kwega kunokanganisa chimiro chako pane TOP.
c. Sitemaps: Apa ndipo paunogona kuendesa isemap yewebhu webhusaiti yako kuGoogle kuti uone kuti ndeipi sitemaps yakaiswa indexed uye ndeipi ine zvikanganiso.
Pasi petafura 'Yakatumirwa Sitemaps', iwe unogona kuona huwandu hweesemaps iwe watumira kuGoogle yekutsvaga console. Kubva pano iwe unokwanisa kutarisa mamiriro avo pamwe nehuwandu hwema URL avanazvo.
Iyo 'Peji Yekukurumidza Yekutsikisa' chishandiso inoshandiswa kuona kana peji rako rekutakura nguva rinosangana neGoogle miyero. Ichazivisawo zvikanganiso zvinoda kugadziriswa uye inokupa iwe mazano ekuvandudza aunogona kushandisa kuti uvandudze nguva yekuremerwa yewebhu peji rako. Inotevedzera avhareji mutoro nguva kune vese desktop uye nharembozha.
Mumwe haakwanise kusimbisa kukosha kwekuongorora kwako SEO maitiro uye kubva kuchinyorwa ichi, unogona kuona kuti izvi zvinoitwa sei nenzira yakanakisa - iyo nzira Semalt.